Umthetho wezimo ezingalindelekile kanye ne-coronavirus (COVID-19) - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ilungiswe ngo-July 1, 2020
Ngo-March 11, i-World Health Organisation (WHO) yamemezela ngokuqubuka kwe-coronavirus, eyaziwa ngokuthi yi-COVID-19, njengobhubhane lomhlaba wonke. Kusukela ngaleso sikhathi, ukuqubuka kwale sifo sekusabalele ngokushesha nohulumeni emhlabeni wonke bathatha izinyathelo ezisheshayo ukuze banciphise ukubhebhetheka kwe-COVID-19.
Ngenxa yalokho, sihlinzeka ngalokhu okulandelayo kwe-COVID-19 ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile ukuze sisize ekuvikeleni umphakathi wethu nasekutheni ube nokuthula kwengqondo. Sicela ubeke iso kuleli khasi ukuze uthole ezakamuva maqondana nemininingwane.
Icebiso: Uma uyisivakashi, ungathola izindlela zokukhansela nokubuyiselwa kwemali ngokuthi uye ekhasini elithi Uhambo nokukhetha uhambo lwakho—thola ukuthi kanjani. Uma ungumbungazi, uzothola imininingwane kudeshibhodi yakho yokubungaza.
Ukubhukhwa kwezindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngomhla ka-March 14, 2020, noma ngaphambi kwalokho, okunosuku lokungena oluphakathi kuka-March 14, 2020 no-August 15, 2020, kuhlanganisiwe ngaphansi kwenqubomgomo futhi kungakhanselwa ngaphambi kokungena. Izivakashi ezikhanselayo zizoba nezindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali futhi ababungazi bangakhansela ngaphandle kwenkokhiso noma ukuphazamiseka kwesimo sabo Sombungazi ovelele. Kuphakathi kokuthi i-Airbnb izobuyisa imali, noma ikhiphe isikweletu sohambo esihlanganisa wonke amanani esevisi okukhansela okuvikelwe. Ukuze ukhansele ngaphansi kwenqubomgomo, kuzodingeka ufakazele amaqiniso kanye/noma unikeze ngamadokhumeti asekelayo esimo sakho esingalindelekile.
Inqubomgomo yokukhansela yombungazi izosebenza njengokujwayelekile ekubhukheni okwenziwe ngemva kuka-March 14, 2020.
Ukukhansela kuzosingathwa ngokuvumelana nokuhlanganiswa kwezimo ezingalindelekile okusebenza ngesikhathi sokuthumela, nokubhukha obesekukhanseliwe kakade ngeke kucatshangelwe kabusha.
Izinqubomgomo ezahlukahlukene ziyasebenza ekubhukheni kwasekhaya e-China mainlandkanyenokubhukha kwe-Luxe noma i-Luxury Retreats.
Ukubhukhwa kwezindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngo-March 14, 2020, noma ngaphambi kwalokho, okunosuku lokungena oluphakathi kuka-March 14, 2020 no-August 15, 2020, kungakhanselwa ngaphambi kokungena. Lokhu kusho ukuthi izivakashi ezikhansela ngaphansi kwenqubomgomo zizobuyiselwa imali ephelele noma isikweletu sohambo senani ezilikhokhile (lapho kutholakala khona isikweletu sohambo), ababungazi bangakhansela ngaphansi kwenqubomgomo ngaphandle kwenkokhiso noma ukuphazamiseka kwesimo sabo Sombungazi ovelele, futhi kuphakathi kokuthi i-Airbnb izobuyisela imali, noma ikhiphe isikweletu sohambo ngenani elihlanganisa wonke amanani esevisi.
Ukubhukhwa kwezindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngo-March 14, 2020, noma ngaphambi kwalokho, okunosuku lokungena olungemva kuka-August 15, 2020, okwamanje akuhlanganisiwe ezimweni ezingalindelekile ezihlobene ne-COVID-19. Inqubomgomo yokukhansela yombungazi izosebenza njengokujwayelekile.
Uma ukubhukha sekuvele kuqalile (isikhathi sokungena sesidlulile) lesi simo esingalindelekile asisebenzi.
Ukubhukhwa kwezindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa kwe-Airbnb okwenziwe ngemva kuka-March 14, 2020 ngeke kuhlanganiswe ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile, ngaphandle kwalapho isivakashi noma umbungazi ephethwe yi-COVID-19 njengamanje. Izimo ezihlobene ne-COVID-19 ezingahlanganisiwe zibandakanya: ukuphazamiseka kwezinto zokuhamba nokukhansela; izeluleko nemikhawulo yokuhamba; izeluleko zezempilo nokuhlukaniswa nabantu; izinguquko emthethweni osebenzayo; nokunye okuyimiyalo kahulumeni—efana nemiyalo yokuphuma endaweni, ukuvalwa kwemingcele, ukwenqatshelwa kokuqasha isikhathi esifushane kanye nezimfuneko zokuhlala lapho ukhona. Inqubomgomo yokukhansela yombungazi izosebenza njengokujwayelekile.
Uma uyisivakashi, ungathola izindlela zokukhansela nokubuyiselwa kwemali ngokuthi uye ekhasini elithi Uhambo nokukhetha uhambo lwakho—thola ukuthi kanjani. Uma ungumbungazi, uzothola imininingwane kudeshibhodi yakho yokubungaza.
Sihlele izihloko ezizosiza umphakathi wethu phakathi nalesi sikhathi Esikhungweni Solwazi. Ungathola imininingwane yakamuva ngesikwenzayo nge-COVID-19, kusuka kwezakamuva zezinqubomgomo kuye ezinsizeni zababungazi nezivakashi.
Ungaphinde ufunde umthetho wezimo ezingalindelekile ukuze ufunde ngokuvikelwa kwezimo ezingahlobene ne-COVID-19.
Sicela wonke amalungu omphakathi akhumbule inhlonipho, ukungabandlululi kanye nomthetho wethu wokungabandlululi lapho ekhulumisana namanye amalungu omphakathi wethu.
Sizoqhubeka nokubukeza ukusetshenziswa kwale nqubomgomo. Sicela uqaphe leli khasi ukuze uthole ezakamuva nemininingwane emisha. Uma unokubhukha okwenziwe ngomhla ka-March 14, 2020, noma ngaphambi kwalokho, okunosuku lokungena olungemva kuka-August 15, 2020, sicela uphinde uhlole lapha ngo-July 15, 2020 ukuze uthole okwakamuva.
Ingabe umthetho wezimo ezingalindelekile uyasebenza ekubhukheni kwami ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19?